CNC hwokugaya hwakabvira basa - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Inotungamira Precision CNC Yekugaya Service-OEM / ODM China CNC Kugaya / Kukanya Zvikamu Mugadziri
Iwe unoda yakavimbika here CNC hwokugaya hwakabviramudiwa neusingaenzaniswi mhando? Ouzhan Trade (Shanghai) Co, Ltd. inyanzvi uye neruzivo China CNC kambani inopa chaiyoCNC hwokugaya hwakabvira mabasa ine michina yemhando yepamusoro inosanganisira CNC hwokugaya hwakabviranzvimbo dzinobva ku3 axis kusvika ku5 axis uye mainjiniya ane hunyanzvi.Our edu anoshanda anoshanda zvakanyanya muCAD (makompiyuta-akabatsirwa dhizaini) uye CAM (makomputa-anobatsira kugadzira) zvirongwa. Ivo vanogara vachikwanisa kutsvaga nzira yakanakisa yekugadzira mhando yepamusoroCNC yakagezwa zvikamu uye zvikamu zvevatengi.
Nemasimba akasimba uye makore ezviitiko zvakapfuma, isu tinogona kupa yepamusoro-chinzvimbo asi yakachipa tsika CNC hwokugaya hwakabvira mabasa kusanganisira 3-axis CNC hwokugaya hwakabvira nzvimbo kune 5-axis CNC hwokugaya hwakabvira nzvimbo dzekumusoro-kumhanya CNC kugadzira, kukurumidza prototyping, uye kunyatsoita CNC hwokugaya hwakabvirauye kutendeuka. Yedu yepamusoro-soro inokurumidza CNC zvigadzirwa zvekugaya zvinobatanidzwa mumunda weotomation indasitiri, aerogenerator, mota zvikamu zvemuchina, michina yekugaya, zvekurapa zvishandiso, zvishandiso zvelebhu, magetsi emagetsi zvikamu, nezvimwe.
Ouzhan Precision CNC Kugaya kugona uye Zvimiro:
- Makore gumi neshanu ezviitiko uye kuziva-sei mukati Cnc machine mabasa, Ouzhan inonyanya kupa OEM / ODM CNC hwokugaya hwakabvira basa uye zvigadzirwa zvine hukama zvinosanganisira kunyatso gaya, simbi yekugaya, plastiki mlling, nezvimwe.
- Tsigira yakaderera, yepakati kusvika yakakwira vhoriyamu batch kugadzirwa.
- Rapid prototyping uye magumo-kushandisa kugadzira.
-Kukwirisa kwehunyanzvi, kukwirisa kugadzirwa uye nekuvimbika kwakanyanya.
- Hwakasiyana hwakawanda hwesarudzo yesimbi nemapurasitiki zvinhu.
- Anodiwa apedza uye akasimba tolerances anowanikwa.
- Anopfuura makumi maviri seti epamberi CNC hwokugaya hwakabvira michina muOuzhan.
Nei Uchisarudza Ouzhan CNC Milling Services
Yedu yepakati yekugadzira michina inotumirwa kubva kuSwitzerland neJapan, iyo inogona kupa vatengi kukwirisa (± 0.01mm) uye yakachipa CNC hwokugaya hwakabvira mitengo.
2.Multiple CNC yekugadzira kugona
Kuwedzera azvikuya, isu dzidzira pakona, lathing, kuchera, CNC yekutendeuka uye yekugaya masevhisi, saka unogona kuwana hombe sarudzo ye Cnc machine psac zvikamu kubva kuchikwata chedu chakavimbika.
Tine hunyanzvi hwehunhu hwekuongorora vashandi & zvigadzirwa, zvinoenderana nematanho epasi rose kune zvigadzirwa zvako kuti uedze, uye ubudise yakadzama bvunzo mushumo wevatengi Cnc machine zvikamu.
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Welcome to share your 2D or 3D drawings of your Cnc machine zvikamu nesu, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
Chii Chinonzi CNC hwokugaya hwakabvira Service & Sei CNC azvikuya Anoshanda
CNC hwokugaya hwakabvira inzira yekubvisa inobvisa iyo inoburitsa zvinhu kubva pasimbi kana epurasitiki mabhureki kuti ibudise zvikamu zvakaringana zvine kushivirira kwakasimba.
CNC hwokugaya hwakabvirayakanyatsokodzera seyechipiri kana yekupedzisa maitiro eakagadzirwa kare workpiece, ichipa tsananguro kana kuburitsa maficha echikamu, senge maburi, slots, uye tambo. Nekudaro, maitiro acho anoshandiswa zvakare kugadzira chidimbu cheshoko kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Muzviitiko zvese izvi, iyo yekugaya maitiro inobvisa zvishoma nezvishoma kuita chimiro chinodiwa uye chimiro chechikamu. Chekutanga, chishandiso chinocheka zvidimbu zvidiki-kureva machipisi-kubva pabasa rekugadzira chimiro uye chimiro. Tevere, iyo yekushandira inoenda pasi pekugaya maitiro nekukwirira kwakanyanya uye nehukuru hwakanyanya kupedzisa chikamu neicho chaicho maficha uye maratidziro. Kazhinji, chikamu chakapedzwa chinoda akati wandei machining ekupfuura kuti uwane iko kunodiwa kunyatso uye kushivirira. Kune mamwe mativi akaomarara ejometri, akawanda maseti setups anogona kudikanwa kuti apedze maitiro ekugadzira.
CNC hwokugaya hwakabvira Materials - Materials Rinoshandiswa kuti CNC hwokugaya hwakabvira
Zvinhu zviripo zveCNC Milling
Mhangura C101 Mhangura C101
Mafomu eCCC Milling Services uye Zvikamu
Heano sarudzo yakasarudzika yesimbi pamusoro yekupedzisa masevhisi pane yako sarudzo yemachini CNC yekugaya zvikamu kuti uvandudze kutaridzika kwezvikamu, kumeso kutsetseka, kuramba ngura, uye mamwe maitiro: